I-Guggulsterone powder (95975-55-6) hplc =98% | Ukurhoxisa iR & D Reagents
/ iimveliso / IiReagents zeR & D / Guggulsterone powder
SKU: 95975-55-6. Udidi: IiReagents zeR & D
I-AASraw ihamba kunye nekhono lokuvelisa kwigram ukuya ku-Guggulsterone powder (95975-55-6), phantsi komgaqo we-CGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Raw Guggulsterone powder Abalinganiswa basisiseko
I-Raw Guggulsterone powder ekusebenziseni
Devadhupa, Balsamodendrum wightii, Balsamodendrum mukul, Commiphora mukul, Commiphora wightii, Gomme Guggul, Gomme-Resine de Guggul, Guggal, Guggul Gum Resin, Guggul Lipids, Guggulipid, Guggulipide, Guggulu, Guggulipid, Guggulipide, etc
Ukusetyenziswa kweGuggulsterone powder
I-Guggulsterone powder yi-phytosteroid efumaneka kwi-resin yesityalo se-guggul, i-Commiphora mukul. I-Guggulsterone powder ikhona njengokuba yeyiphi i-stereoisomers, i-E-Guggulsterone powder kunye ne-Z-Guggulsterone powder. Kubantu, liba ngumchasane we-farnesoid X receptor, eyake ikholelwa ukuba ibangela ukunciphisa isilwanyana se-cholesterol kwisibindi. Kuye kwapapashwa uphando oluthile olubonisa ukuba akukho ukunciphisa i-cholesterol eseleyo eyenzekayo usebenzisa ii-dose ezahlukahlukeneyo ze-Guggulsterone powder, kunye namanqanaba e-lipoprostin ephantsi ("i-cholesterol embi") yanda kubantu abaninzi. Nangona kunjalo, i-Guggulsterone powder iyisithako ekuncediseni izondlo ezininzi.
I-oleogum resin (ebizwa ngokuba yi-guggul) esuka kumthi weguggul, i-Commiphora mukul, efunyenwe eNdiya, eBangladesh nasePakistan, isetyenziselwe ukuphatha izifo ezahlukahlukeneyo kuquka i-hyper-cholesterolemia, i-atherosclerosis, i-rheumatism, kunye nokukhuluphala kwamawaka eminyaka. I-Guggulsterone powder ehlukaniswe ne-guggul iye yachongwa njenge-bioactive constituent ejongene nemiphumo ye-guggul. Ekubeni isifundo sokuqala esibonisa imiphumo yesifo se-guggul kwimodeli yezilwanyana kwi-1966, ezininzi iindlela eziye zenziwa ngenyango kunye neekliniki zenziwe. Nangona ukungafani kwindlela yokufunda, ukulinganisa izinga, ukuhlaziywa kwamanani, isayizi yeesampula, kunye nomphumo wesibalo sabantu ngokungahambelani ezithile ekuphenduleni kwonyango, idatha eqokelelweyo esuka kwi-vitro, i-preclinical, kunye neeklinikhi zixhasa kakhulu izibalulo zokwelapha ze-guggul ezichazwe Umbhalo we-Ayurvedic yakudala. Nangona kunjalo, izifundo zekliniki zexesha elizayo kunye nobukhulu obukhulu kunye nexesha elide kufuneka ziqinisekise ezi mabango. Izinzuzo ze-cardiovascular of therapy zithathwe kwimisebenzi eminingi ye-pharmacological ehambelana ne-guggul okanye i-Guggulsterone powder, ngokukodwa i-hypolipidemic yayo, i-antioxidant, kunye nemisebenzi yokulwa ne-anti-inflammatory. Kuye kwaqulunqwa ukuba i-Guggulsterone powder ingumchasi kwi-farnesoid x receptor (i-FXR), umlawuli oyintloko wokubhalwa komzimba wokugcina i-cholesterol kunye ne-bile acid homeostasis. Ukuchasana kwe-FXR ngo-Guggulsterone powder kuye kucetyiswa njengendlela yokwenza i-hypolipidemic effect. Uphando olutshanje lubonisa ukuba i-Guggulsterone powder igxininisa ipompo ye-salt export export (BSEP), umthumeli we-efflux onoxanduva lokususa i-cholesterol metabolites, i-bile acid ukusuka esibindi. Ukugqithiswa kwe-BSEP iboniswa yi-Guggulsterone powder ikhuthaza i-cholesterol metabolism kwi-acid acids, kwaye ngoko ibonisa enye indlela eyenzekayo ye-hypolipidemic. I-Guggulsterone powder ifunyenwe ngokukhawuleza inqanda ukusebenza kwe-nyukliya-kappaB (NF-kappaB), umlawuli obalulekileyo weempendulo ezivuthayo. Ukunyanzeliswa okunjalo kwe-NF-kappaB kusebenziselwa yi-Guggulsterone powder kuye kucetyiswa njengendlela ye-anti-inflammatory effect ye-Guggulsterone powder.
Kwaye Ziziphi Ezinye Iimpawu Zokwehla?
Kwaye kunengqiqo kum ukuba ukuba inokudibanisa i-hormones ye-thyroid nefuthe le-fatrogen (i-adrenaline). Kwakhona, unomdla kukuba i-ECA uhlobo lwesitampu iyancipha ukunciphisa inani le-hormone ye-thyroid ejikelezayo egazini ngokuhamba kwexesha. I-Guggulsterone powders yenza umsebenzi omkhulu wokuvimbela ukunciphisa, ngoko ke ukugcina zonke iinkqubo zokutshisa iifutha zomzimba ezisebenza kwindawo ephezulu.
Izindlela zokugqibela zokuthi i-Guggulsterone powders inokuzuza ekuloleni ukutshisa i-fat e-food ketogenic kunye nokusetyenziswa kwe-hormone yokukhula. Ngokudlulayo kwexesha, iidloji ze-ketogenic zivame ukunciphisa ukusebenza kwe-thyroid ngokunciphisa ukuguqulwa kwe-T4 ukuya kwi-T3 enamandla. Kwakhona, apho i-Guggulsterone powders ithathwa imihla ngemihla kwiinyanga ze-3, zavelisa ukunciphisa ukunyuka kwezilonda kwiininzi zezigulane. Nge-tetracycline, ukunciphisa ipesenti kwizilonda ezivuthayo kwakuyi-65.2% xa kuthelekiswa ne-68% kunye ne-Guggulsterone powders. Njengoko uyakubona, umhlobo wethu uGuggul unamandla kakhulu ekulwa nemicu.
Ngubani onokuzuza kule nto? Hmmm !!! Ewe, njengoko ndingazixelela, phantse wonke umntu. Akukho mntu omnye ndiyaziyo ukuba akayithandi ibhande elingcono. Oku kuyinyani ngokukhethekileyo kulabo ba-anabolic / androgenic steroids njengoko oku bavame ukwandisa ukucoceka kwesikhumba kunye nokwenza i-acne. Makhe ndiqikelele - akukho mntu uhleka uMnu Huggulee Guggulee! Enyanisweni, unokuba negama elimnandi kodwa encwadini yam uyindoda. Kuphi enye indawo onokuyifumana i-compound eyokukunceda ulahlekelwe ioli, uphucule iphrofayili yakho ye-cholesterol, kwaye ngexesha elifanayo uphucule umbala wakho? Ndakhange ndikhangele ixesha elide kwaye nginakuze ndifumane umqhubi omnye.
Kufuneka Kuthathwe Kangakanani?
Ngaba kukho naziphi na iimpembelelo zangasese?
Ewe! Ngaphambi kokuba ndiyilibale, umlinganiselo omnye kufuneka uthathe ngu-30-60mg kathathu ngosuku ngemini yokutya.
Njalo khumbula ukuba ufumanisa umkhiqizo oqulethe i-Guggul ephakamileyo yamanzi! Ingcebiso yam yokugqibela ke ukuphuma kwaye ufumane lo mfana, ugubungele isandla sakhe, kwaye uvale umkhosi weenzuzo awazisa ngazo.
Isilumkiso kwiGuggulsterone powder
I-resin ephuzi ekhishwe kwisityalo se-guggul iqukethe izinto ezibizwa ngokuba yiGuggulsterone powders kunye nabanye. Izifundo zeLebhu zifumene ukuba i-Guggulsterone powders ingatshintsha i-metabolism ye-cholesterol ngesibindi. I-Guggulsterone powders inokunyusa nokuveliswa kwee-hormone ze-thyroid kwaye iqhelekileyo ifakwe kwisilathiso sokulahlekelwa kwesisindo saloo njongo. Iimveliso eziqulethe izicatshulwa zeguggul kufuneka zithathwe ngokuqaphela ngenxa yobungozi bemiphumo emibi.
Kwamawaka eminyaka, i-guggul resin isetyenziswe kwiyeza zendabuko ukunyanga i-rheumatism, i-arthritis, izifo ze-neurological, iziqhumane, izifo zokuvuthwa kwamanzi kunye nezifo zesikhumba. Iyeza langoku lifumene ubungqina bokuba i-Guggulsterone powders ingenza isibindi, ilungisa iziphazamiso ze-lipid metabolism ezifana ne-cholesterol ephezulu. Ngendlela engaziwayo, i-Guggulsterone powders yandisa ukwanda kwe-thyroid ye-hormone, ukunyusa amandla emzimbeni.
Eminye Imiphumo engaphandle
I-Guggulsterone powder yi-ligand ebanzi ye-hormone receptors, kwaye iyaziwa ukuba inezinto ezilandelayo:
I-progesterone receptor ekhethekileyo ye-agonist (Ki = 201 nM)
I-Glucocorticoid receptor antagonist (Ki = 224 nM)
I-Androgen receptor antagonist (Ki = 240 nM)
I-Farnesoid X i-receptor antagonist (IC50 = 5-50 μM)
I-Pregnane X receptor agonist (EC50 = i-2.4 μM ((Z) -isomsi))
I-Guggulsterone powder ifunyenwe kuphando lwezilwanyana ukuba lusebenze ngomlomo; ine-bi-availability ye-42.9% emva kokulawulwa komlomo kwiigats, kunye ne-half-life of around 10 iiyure kule ntlobo, ebonisa iphrofayli efanelekileyo ye-pharmacokinetic.
I-Raw Guggulsterone yokuthengisa
Indlela yokuthenga i-Guggulsterone powder evela kwi-AASraw